ဗဟုသုတ – အခမဲ့
BANGKOK — A Myanmar court has found 33 farmers living next toaSpecial Economic Zone guilty of criminal trespass,aruling seen by activists asablow to …
PATHEIN, Irrawaddy Region — A local court in Pathein on Monday sentencedahuman rights activist to three months in prison for broadcasting live on Facebookadrama deemed …
YANGON — Amending the military-drafted 2008 Constitution was one of the National League for Democracy (NLD)’s main campaign promises in the run-up to the 2015 election that brought it …
MANDALAY — Two men who participated in protests in Mandalay calling for the government to immediately rescue villagers in Kachin State who have been trapped due to violence between …
It has been 10 years since the military-drafted 2008 Constitution entered into force. Constitutional reform remains elusive, and the military retainsapowerful influence under the charter. The Irrawaddy …
မဝေသစ်လွင်အကြောင်း ရေးဖို့တွေးနေတာ တော်တော်ကြာပါပြီ ခုတော့ အကယ်ဒမီပေးပွဲရဲ့ ပုံရိပ်တွေကြောင့် ပိုလူသိများလာလို့ ရေးဖို့ သတိရသွားတာပါ။ သူ့ကို အရမ်းအားကျမိတယ်ဆို လွန်တယ် မထင်ပါနဲ့။ သူဟာ အသက်၂၈နှစ်ပဲရှိပါသေးတယ်။ ကိုယ်နဲ့ အသက်သိပ်မကွာတဲ့ မိန်းမတစ်ယောက်ဟာ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ထိပ်တန်းစီးပွားရေး ပညာရှင်တစ်ဦးဖြစ်နေတာ ကျွန်တော်အရမ်း လေးစားမိတယ်။ သူဟာ ဦးနှောက်နဲ့ အာရုံကြော အထူးကု ဆရာဝန်မကြီး Drဝင်းမင်းသစ်ရဲ့ …
အရသာရှိသော ဆိတ်ပဲစွတ်ပြုတ် လုပ်ကြည့်မယ်
ဆိတ်သားဟင်းချက်တော့မယ်ဆိုရင် အဓိက ဆိတ်သားအနံ့ကို ပျောက်အောင်ချက်နိုင်ဖို့ပါဘဲ….တချို့က …မဆလာနိုင်နိုင် ထည့်ချက်ပေမဲ့….ဆိတ်ညှီနံ့ကတော့ လုံးဝမပျောက်ပါဘူး။ Ok Let’s go. ….ဆိတ်သားဟင်းချက်မယ်ဆိုရင်….အမွှေးနံ့သာ…အတော်ရှာဖွေရပါတယ်….ပထမဆုံး….သစ်ကြမ်းပိုးရယ် ကလယ်ဝေးရွက်ရယ်…ဒံပေါက်ချက်တဲ့ သူတွေဆီက တောင်းပါတယ်….နောက် ဖာလာ ၅စေ့ လေးညှင်း နံနတ်ပွင့်စမုံစပါး…ဒါတွေကတော့ နည်းနည်းစီ ကွမ်းယာဆိုင်က တောင်းပါဒယ်…..နောက် မုံညှင်းစေ့….ကုလားထမင်းဆိုင်တွေကတောင်းပါတယ်။ နောက်ပျဉ်းတော်သိမိရွက်….အခုပြောတာ တွေ တနေရာတည်း ဝယ်လို့ရရင် ပိုအဆင်ပြေပါတယ်။ ပထမဆုံး သိရမှာက …
ပျောက်ကွယ်သွားသည့် စည်မောင်းတီး၍ သင်္ကြန်စာဖတ်လေ့ရှိခဲ့ကြသောဓလေ့ကို ပြန်လည်အသက်သွင်းခဲ့ကြသူများ လေးစားလောက်စရာပါ
ခရက်ဒစ် Simon Htoo Thant ဧပြီလ ၁၃ ရက် ၂၀၁၈ မြင်ကွင်း ဟိုးရှေးရှေးတုန်းကပေါ့ဗျာ ကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်ကြီးရဲ့ အတိတ်သမိုင်းစာမျက်နှာတွေပေါ်မှာပေါ့ဗျာ။ ဒီနေ့ဒီရက်ဒီလိုအချိန်အခါမှာ ဒီလိုရိုးရာဓလေ့ထုံးစံတွေနဲ့ပေါ့။ အခုတော့ အားလုံးပျောက်ကွယ်သွားခဲ့ပါပြီလေ။ Photo credit_Kyaw Zaw Lay “ရတနာပုံခေတ်တွင် မြန်မာ့ရိုးရာအတာရေသဘင်သင်္ကြန်ရောက်ရှိလေတိုင်း နန်းမြို့ရိုးမှ ဝန်တစ်ပါး၊ သိုင်းကိုင် နှစ် ဦး၊ ရေတကောင်းကိုင် တစ်ဦး၊ …
သူမတူတဲ့ မော်လမြိုင်သင်္ကြန်၊ ဒီနှစ် ဘာတွေ ထူးခြားလဲ
ဟင်္သာမီဒီယာ သရုပ်ဖော်ဆောင်းပါး မွန်ပြည်နယ်ရဲ့ မော်လမြိုင် သင်္ကြန်ကတော့ တခြား ဒေသတွေနဲ့ မတူတဲ့ ဓလေ့ထူးတွေရှိပါတယ်။ တခြားဒေသတွေမှာ သင်္ကြန်အရသာကို အကြိုနေ့က စပြီး ခံစားကြပေမယ့် မော်လမြိုင်ရဲ့ သင်္ကြန် အငွေ့အသက်ကတော့ အကျနေ့ရောက်မှစပါတယ်။ ဒါ့အပြင် သင်္ကြန်လည်တဲ့ နေရာမှာလည်း ရက်သတ်မှတ်ချက်တွေနဲ့ ရေပတ်ခံထွက်လေ့ ရှိတဲ့ ဓလေ့ တစ်ခုလည်း ရှိနေပါတယ်။ သင်္ကြန် အကျနေ့ဆိုရင် …
ဘယ်မူးယစ်ဆေးဝါးက အစွဲလန်းစေတတ်ဆုံးလဲ။ ၂ဝဝ၇ခုနှစ်မှာ ဒေးဗစ်နတ်ထ်နဲ့ သူ့ရဲ့လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များက ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များကို စူးစမ်းမှုတွေ လုပ်ဆောင်ဖို့ တောင်းဆိုခဲ့ကြပါတယ်။ ရရှိလာတဲ့ စိတ်ဝင်စားစရာ အချက်တွေက… ၁။ ဘိန်းဖြူ အမြင့်ဆုံးရမှတ်၃မှတ်မှာရမှတ်၃မှတ်နဲ့ဘိန်းဖြူကိုအစွဲလန်းတတ်စေဆုံး မူးယစ်ဆေးဝါးအဖြစ် ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များကအဆင့်သတ်မှတ်ပေးခဲ့ ကြပါတယ်။ဘိန်းဖြူဟာ တိရစ္ဆာန်များနဲ့ စမ်းသပ်ချက်ကြည့်ရာမှာလည်း ဦးနှောက်အတွင်း ဒိုပါမိန်းအဆင့်ကို ၂ဝဝ% အထိမြင့်တက်စေတဲ့ မူးယစ်ဆေးဝါးတစ်မျိုး ဖြစ်နေပါတယ်။ဒါ့အပြင် အစွဲလန်းစေဆုံး မူးယစ်ဆေးဝါးဖြစ်တာကြောင့် မြင့်မားတဲ့ …